Nandalo tetsy Ambohitsorohitra aho. Vita tafo tsara kosa ilay trano hazo miendrika «Manampisoa» : anaran’ilay lapa fahiny tao Anatirovan’Antananarivo, ary naorina ho an’ny Mpanjakavavy Rasoherina, izay niamboho ny taona 1868.
Nokasaina talohan’ny 2009 io trano etsy Ambohitsorohitra io, saingy nihantona noho ireny raharaha politika ireny. Efa nahiako ho lo am-pitoerana teo ny andry efa tafatsangana : soa ihany, sivy taona aty aoriana, voatafo tsy mihanjaka intsony. Mba handova zava-bita mahafinaritra izay Filoha manaraka eo.
Izay tena eritretitra nampirisika io trano io tsy dia haiko loatra. Fa ny endriny «trano hazo» no mampiavaka azy. Hazo tahaka ireny avokoa ny trano teto Madagasikara taloha. Ny biriky masaka sy ny vato tsy nampiasaina tamin’ny fanaovan-trano raha tsy efa tonga teto ry Jean Laborde sy ireo Misionera britanika. Trano kotona avobe fa tsy misy rihana tahaka an’i Besakana na i Mahitsielafanjaka no tany aloha. Dia nanjary «Tranobe» nisy rihana sy lavarangana manodidina taty aoriana. Dia izay vao ny «Trano gasy» mbola tratrantsika. Mbola misy maromaro azo bikaina etsy Ambodimita ampototr’Ambohidroa. Na eny Ambatomanga, atsinanan’Anjeva, ho an’izay te hitsangatsangana.
Ny Mahagaga, sady mampalahelo, dia ny tsy fitandreman’ny Fanjakana ny endriky ny trano izay hamaritra ny endriky ny Tanàna. Raha samy hanangana «cube» béton, sy vy, ary fitaratra, isika, raha ho fenointsika Carlton sy Tour Orange ny Tanàna, tsy hisy intsony ohatra ny hampiavaka an’Antananarivo, Fianarantsoa, Ambatondrazaka, amin’ny any New York, Shanghai, na La Défense. Ny fahasamihafana isanisany anefa no mampanankarena ny zanak’olombelona.
Afaka manangana trano avobe ny Fanjakana fa mba mitandrina tahaka ny nanaovana ny sarin’ny Trano etsy Ambohidahy misy ny Ministeran’ny Varotra. Nokendrena tsy ho very ny maha «Trano Gasy». Ny Frantsay no nanao fanahy iniana nanangana ny «Bahut», Lycée Gallieni, miezinezina natao hanalokaloka ny lapan’i Manjakamiadana sy Andafiavaratra. Mampalahelo fa ny mpitondra malagasy dia tsy mahay mampanaja ny endrika manokan’ny vohitra tena mitondra ny anaran’Antananarivo. Etsy Ambohipotsy, misy Trano mba miezaka manaja ny «Trano Gasy». Vao mikisaka eo Ambohimitsimbina anefa dia efa «moderne» loatra manimba ny Tantaran’ny Vohitra Analamanga. Tahaka izany koa ilay trano etsy Ambatovevanja natao ho an’ny Tafika : ny Fanjakana nantenaina hiaro ny Kolontsaina anatin’ny mari-trano indray no manafangari-javatra.
«Cogito ergo sum» : Mihevitra aho, Misy aho izany, hoy ilay mpandalina René Descartes. Raha resaka Kolontsaina, tiako ovaina hoe «Samy Hafa ny anay, Misy izany izahay». Inona moa no mahasarika ny Mpizahantany hankaty amintsika ? Hijery zavatra tsy fahita any aminy. Ka maninona isika no hampitovy randrana aminy.
Vita ny fampielezan-kevitra. Naheno resaka Kolontsaina ve ianareo ? Faralahy sady kamboty hatrany ny Kolontsaina, efa ho enimpolo taona izao. Hahagaga ve raha may ny Rova. Hahagaga ve, raha izao isika miresaka izao, vaky ny fitaratry ny «coupole» ao Andafiavaratra ka hotsaky ny orana ilay gorodona nandaniambola. Tsy Lapa sy Trano ihany no jerem-potsiny, fa ny Vakoka, ny Boky, ny Gazety tamin’ny taonjato lasa.
Fitatanambola, Raharahambahiny, Fiarovana, Fitsarana, Atitany : ireo no sokajiana ho «Ministères régaliens», Ministeran’ny Fiandrianam­pirenena. Raha Nosy tahaka an’i Madagasikara, aiza ho aiza ny toerana omena ny Rano sy Ranomasina ? Raha amin’izao fanaovan’ny OPEP ampihimamba ny solika izao, aiza ho aiza ny Angovo ? Ary raha te hanana toerana manokana anivon’izao tontolo izao Madagasikara, ny Kolontsaina no Tombony mampiavaka sy maha samy hafa antsika.
Na ny Trano ho an’ny Ministeran’ny Kolontsaina aza dia indraminy. Ankehitriny, mialokaloka ao amin’ny Tranombokim-pirenena ny Ministeran’ny Kolontsaina. Raha io Trano etsy Ambohitsorohitra io moa no mba atokana ho an’ny Kolontsaina, «K-Lehibe»…
Communauté internationale – « On ne peut pas avoir deux présidents »
Loi des finances 2019 – La HCC rejette la demande de Mahazoasy